Sunday September 26, 2021 - 02:06:42 in Wararka by Super Admin
(Rating 2.6/5 Stars) Total Votes: 8
Waagacusub.com - Shalay ilaa caawa Hotel Saxafi waxaa ka dhacay laba shir. Mid Sacad ay ku maxkamadeeyeen 4 nin oo xalay u tagtay Farmaajo. Iyo mid HABARGIDIR ay ku go'aansadeen ineey caaway u tagaan QoorQoor oo dhahaan la hadal warbaahinta oo
Waagacusub.com - Shalay ilaa caawa Hotel Saxafi waxaa ka dhacay laba shir. Mid Sacad ay ku maxkamadeeyeen 4 nin oo xalay u tagtay Farmaajo. Iyo mid HABARGIDIR ay ku go'aansadeen ineey caaway u tagaan QoorQoor oo dhahaan la hadal warbaahinta oo u sheeg wixii aad kala soo kulantay dhexdhexaadintii aad waday. Haddii uu diido waxaa lagu balamay in Habargidir ay hadasho oo yiraahdaan nama matalo QoorQoor kadibna GalMudug laga qaato talaaboyin adag.
Shirkii Sacad ka ayaa lagu daahay ilaa maqribkii 4 tii nin 3 ayaa joogay, is-difaac ka dib waa qirteen qaladkooda, waxaana la hor keenay HG oo dhan, waxayna bixiyeen raali galin. Waxay kala ahaayeen (Iimaan Jiirow, Ina Jamac Seed, Ina Calool Geel iyo Ina Itoobiya)
Mar hadaad maqasho Ina hebel waa Rer baadiye, aan magac laheyn.
Shirkii HG ayaa la galay Maqrib kadib waxana lagu heshiiyay go’aanka kore inuu hadlo QoorQoor caaway ama talaabo laga qaado, hadana loo wada tago. Markuu maqlay in loosoo socdo ayuu soo hadlay oo yiri "Waan jiranahay, faleebooyin ayaa igu socda, ee yaan la ii imaan” Hada waxa la diray rag soo hubiya ineey runtiis tahay oo uu jiran yahay.